Fikradaha Naqshadaynta Sumobeelka Fikirka Naqshadda Ragga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Fikradda naqshadeynta jimicsiga ee ragga iyo dumarka
Ma ogtahay sababta ay dadku si tartiib tartiib ah ugu soconayaan tattooska yar yar ee adduunka? Waxaa jira dhaqdhaqaaq! Haa, dhaqdhaqaaqa samaynta hadal cad oo leh tattoo tani waa sababta aad u badan oo naga mid ah oo u socda. Waxaad dareemi doontaa dareen ah haddii aad fahamsan tahay sababta ay maanta u isticmaashay.
Sannado ka hor, Project Semicolon waxaa loo bilaabay inuu matalo jacaylka iyo rajo-gelinta kuwa la dagaallama naftooda, xatooyo, is-dilid iyo niyad-jabka. Bal qiyaas sida tattoo ee sidan oo kale ay dadku ugu guulaystaan ​​dagaalyahanadooda madow. Waan ognahay in qof kasta oo isticmaalaya semicoloon uu khuseeyo marka ay soo afjareen jumladaha.
Taasoo ah shaashadda # qamiis yar yar laakiin macnaha waa wax aad u weyn. Tattoo ayaa soo jiidata dareen badan, waxaana loo adeegsadaa inay matalaan maandooriye, niyadjab, is-qadarin naftiisa, is-dilid iyo sidoo kale rabitaanka nolosha. Ereyga 'semicolon' ayaa ka hadlaya macnaha nolosha, si loo xaqiijiyo dadka in dhamaadka uusan imaan. Maanta, semicolon wuxuu calaamad u yahay #tattoo calaamadda kuwa ku dhibtooday inay ku noolaadaan si ay u xasuusiyaan inay leeyihiin wax ay ku nool yihiin. Waxaa jira noocyo kala duwan oo tattoo ah oo aad adigu tahay mid lagu go'aansado sida aad u rabto in aad semicolon-kaaga u ekaato. Dhamaadka maalinta, semicolonku wuxuu u taagan yahay wax ka weyn oo ka sii macno badan oo aad ku qanci kartid.
Kuwa la doorto waxay ku dhejin karaan tattooankan inay u sheegaan waxa ay yihiin. Tattoo-gu waa mid caadi ah waxayna ku dhiirrigelin kartaa dadka inay raacaan riyadaada. Waxaad runtii heli kartaa waxyiga aad u baahan tahay marka aad ku dhejisid shaati-galada jirkaaga. Waxay ka qaadataa madax-bannaanida qofka ku jira. Waxay ku saabsan tahay is-xakamaynta, waxayna sidoo kale ka hadashaa furfurnaanta qofka leh tattoo-ga.
1. Semicolon dhaqameed naqshadeynta tattoo ragga loogu talagalay armaajada
Markaad isticmaashid tattoosyo yar yar, fariinta aad ka soo baxayso waa inaad adigu taageerto ama la dagaalanto halgan ka yimaada gudaha. Maanta, tattoo loo yaqaan 'semicolon tattoo' waxaa loo adeegsadaa diin kasta iyo diin aan diin ahayn kuwaas oo diyaar u ah inay qaataan qayb ka mid ah noloshooda.
2. Calaamadaha iyo semicolonka Fikradda tattoo ee gabdhaha ku jira canqowga
Waxaad bedeli kartaa qeyb ka mid ah markaad tagto tattoos-ka yar-yar. The # design waa qurux badan oo aad ka eeg duwan ka. Farshaxanku maaha inuu waqti qaato ama uu meelo badan ku yeesho maqaarkaaga.
3. Semicolonka wadnaha garaac tattoo ah ee gabdhaha qoorta
Miyuu kaa lumay qof la jecel yahay oo aad is disho? Isticmaalka tattoo this ee kor u qaadaya wacyiga adduunka oo dhan kuwa kuwa la dagaalama caafimaadka maskaxda waxay noqon kartaa waxaad u baahan tahay si aad u hubiso in aad ku guuleysan karto.
4. Semicolon qashinka fikradda naqshadeynta jimicsiga ee gabdhaha
Ku dhiirigeli naftaada oo sawir talefoontan u adeegso sida xasuusinta dagaaladii aad ku dhex martay gudaha.
5. Semicolon garaac tattoo ah ee gabdhaha qoorta
Iyada oo la yiraahdo tattoos semicolon, waxaad dhihi kartaa 'Waxaan u guuri karaa noloshayda.' Haddii aad heysato qof riixaya caafimaadka maskaxda, ha ka waaban inaad ku dhiirrigeliso qofka inuu tago tattoo this.
6. Lovers fikradda naqshadaynta jimicsiga ee gabdhaha
Naqshadeynta qanjirada hoose waa mid gaar ah. Kuwa aan diyaar u ahayn inay maqal qaylo dheer sameeyaan naqshadahooda tattoo, waxay si sahlan u isticmaali karaan.
7. Semicolon iyo fikradaha sawirrada xiddigaha tattoo waayo guys
Ka faaiidaysta tattoo yar-yar, oo noqo guuleyste.
8. Malaa'igaha iyo taarboolka sawir-yar oo ku yaal faraha faraha
Quruxda ay ku xirantahay isticmaalka tattoo-tintaan waxa kaliya oo lagu sharxi karaa oo keliya markaad leedahay maqaarkaaga.
9. lamaanaha Fikradda naqshadeynta madadaalada ee madadaalada ah ee loogu talagalay gabdhaha
U gudbi kuwa aad lumisey shaashadda. Diido in lagu riixo dareenkaaga markaad eegto tattoo this.
10. Muraayadaha fikradda sawir-qaadaha ah ee loogu talagalay gabdhaha
Farriinta, quruxda iyo xasilloonida ay u keenayso isticmaalaha tattoo waa maskax-foori.
11. Qalabka naqshadda madow ee naqshadda madow ee gabdhaha
Tijaabi maanta iyo ku dheji is-gaarsiintaada lana yiraahdo tattoos.
12. Rikoodh fudud fikradda tattoo ee haweenka qoorta
Tags:tattoo yar yar
tattoos iskutallaabtatattoos taajkiitattoos eaglehenna tattoogaraacista gacmahaDhaqdhaqaaqatattoos qorraxdaTattoo infinitylibto libaaxTattoo FeatherTilmaamta jaalaha ahjimicsiga bisadahasawirada malaa'igtaku dhaji tattoostattoo tilmaanTattoos Wadnahatattoos gacantashimbir shimbirgadaal u laabotattoos cagtatattoos moontaraagada kubbaddanaqshadeynta mehndishaatiinka shiidansawirrada raggawaxaa la dhajiyay tattoosfikradaha tattootattoo indhahatattoos qabaa'ilkatattoos qosol lehtattoo ah octopuswaxay jecel yihiin tattoostattoos sleevearrow Tattoosawirada gabdhahatattoos ubaxtattoo maroodigamuusikada muusikadaJoomatari Tattooslammaanahatattoos saaxiib saxa ahtattoo dheemanTartoo ubax badantattoo biyo ahtattoossawir gacmeedcalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahlaabto laabtatattoos qoortakoi kalluunka